'तिब्र प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर बढ्छ' (भिडियो अन्तर्वार्ता) | Kendrabindu Nepal Online News
‘तिब्र प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर बढ्छ’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १५:०२
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बारेमा तिव्र बहस भईरहेको छ । सरकारले यस सम्बन्धी ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा पेश गरेसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा तरंग छाएको हो । यसै विषयमा अल्फाबिटा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष द्विराज शर्मासँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौ ।
एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा एफडिआईको प्रवेशलाई लिएर बहस भईरहेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
मेरो बिचारमा एफडिआई भनेको एउटा ‘हेभि टर्म’ जस्तो लाग्छ । बजारमा हल्ला चलेजस्तो अवस्था छैन । नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष शत प्रतिशत इन्भेष्टमेण्ट दिएको छैन । ५१ प्रतिशत विदेशीलाई र ४९ प्रतिशत नेपालीलाई दिईएको छ । त्यसमा पनि जसको कम्पनी हो अर्थात् जसले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसलाई ५१ प्रतिशत दिने कानुन छ ।
तर बजारमा शत प्रतिशत नै विदेशीलाई दिएको भन्ने म्यासेज गएको छ, त्यो एकदम गलत छ । सरकारको नियम अनुसार अहिले २ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । जसमा पनि चोपडाज पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थियो भने आइडिपी हालसालै सञ्चालनमा आएको हो । अहिले ‘हट टपिक’को रुपमा आइडिपीको कुरा आएको छ जसमा नेपालकै एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ । उहाँको नेपालको नियम अनुसार स्टक होल्डिङ छ त्यही अनुसार आईडिपी आएको हो ।
तपाई आफैँ पनि एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पायोनियर भएर काम गरिहनु भएको छ । नेपाली कन्सलटेन्सी नै सक्षम छन् भनिन्छ । यस्तो हो भने एफडिआई किन चाहियो ?
यसमा पैसा भन्दा पनि सोच प्राथमिक कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा हो । यसमा विदेशी ठूलो प्रोडक्ड कम्पनी आउनु भनेको नेपालीहरुलाई झनै फाइदा हुने कुरा हो । मार्केटिङ हामीले जसलाई गर्छाैँ त्यसको बारेमा बिदेशी कम्पनीहरुले राम्रो प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सक्छ ।
हाम्रा केही कम्पनीहरुले धेरै राम्रो गरेका छन् । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित पनि भईसकेका छन् । यसमा लगानी भन्दा पनि टेक्नोलोजीमा हामीले कति इन्भेष्टमेण्ट गरेका छौँ भन्ने हुन्छ । अहिले धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया मात्र गईराखेका छन् । अमेरिका, युके, क्यानडामा नेपाली विद्यार्थीहरु कमै गएका छन् ।
ठूलो कम्पनी आउँदा हामीलाई नेपालमा पनि ठूला कम्पनी छ भन्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि ठूला कम्पनीहरु छन् ।
विदेशी कम्पनीले सम्पुर्ण मार्केट खाई दियो भने नि ?
आइडिपीको लोकल पार्टनरसँग म धेरै नजिक छु । मैले धेरै राम्रोसंग बुझेको पनि छु । ठूलाठूला कम्पनीले मेजर युनिभर्सिटीहरुलाई मात्रै काउन्सील गर्छन् । जहाँ नेपालको शैक्षिक परामर्श गर्ने लोकल संस्थाहरु छ्न् उनीहरुमध्ये ७० प्रतिशतले युनिभर्सिटी होइन कलेजलाई प्रमोट गर्छन् । जसमा मलाई लाग्छ उनीहरुको ठूलो कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन ।
नेपालको धेरै शैक्षिक परामर्शदाताहरुले जापान, भारतलगायतका देशहरुका लागि काम गर्छन् । त्यसमा विदेशी कम्पनीहरुको फोकस नै छैन । उनीहरुको प्रतिस्पर्धा ठूला कम्पनीहरुसँग नै हुने हो । तर, विडम्वना ठूला कम्पनीहरुसँग मिलेर भर्खर आएका कम्पनीहरु हटाउन ठूलै रणनीतिक खेल भईरहेको छ ।
साना कम्पनी हटाउनमा उनीहरुको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको होला । यसमा ठूलै राजनीति मिसिएको छ । जुन हाम्रो देशको लागि राम्रो होइन । चोपडाज आउँदा केही नहुने आइडिपी आउँदा कानुन परिवर्तन गर्न जानु हाम्रो लागि सुखद हाईन । हाम्रो अष्ट्रेलियासँगको नातालाई यसले नराम्रो आघात पुग्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले चोपडाजलाई खारेज गर्दैछ भन्ने कुरा पनि आएको छ, हो ?
मलाई लाग्छ खारेज गर्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको कानुनमै छैन । यो भनेको उद्योगले गर्नुपर्छ । कुनै बेला आउन दिने र अहिले खारेज गर्नुले हाम्रो देशको ‘इन्भेष्मेण्ट रेटिङ’ घट्छ । यसमा आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि देशको स्वार्थमा सबैले महत्व दिनु पर्छ ।
एउटै आइडिपीले सबैलाई खाईदिन्छ भनिन्छ । तपाईहरु चाँही आइडिपीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ?
ठूलो कम्पनीहरुले बिजनेश खाईदिन्छ भन्ने म मान्दिन । उनीहरुको पनि आफ्नै मार्केट शेयर हुन्छ । उनीहरुले पनि काउन्सिलर राखेरै प्रमोट गर्ने हो । त्यो लेभलमा काउन्सिलिङ दिनलाई हामीले पनि क्वालिटी अपडेट गर्नुपर्छ । हामीले पनि ‘हाई क्वालिटी’को कर्मचारी राख्नुपर्छ । हामीले टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो स्टाफहरुलाई देश विदेश घुमाएर उनीहरुलाई अपडेट गरेर अरु कम्पनीहरुसँग पनि कम्पिटिसन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
मलाई लाग्छ चीन र भारत जस्तै हाम्रो देशमा पनि ठूला कम्पनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । मेरो धारणा भनेको नेपालमा पनि बेस्ट कम्पनी आओस् भन्नु हो । ठूला कम्पनी आउँदा गलत काउन्सिल हुनबाट जोगिन्छ । जतिधेरै कम्पनी हुन्छन् त्यति धेरै विद्यार्थीहरुलाई छान्नको लागि विकल्प हुन्छ । त्यो अवसरबाट आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई बञ्चित गर्नु उपर्युक्त होइन ।
संगठन नै बनाएर विदेशी लगानीको बिरोध गर्ने काम भईरहेको छ । टेवलमा राखेर समाधान गर्न सकिदैन थियो र ?
सकिन्थ्यो । तर कुनै पनि संघ संस्थाको उद्धेश्य अर्काे कम्पनीहरुलाई खेदाउने भन्ने हुनु हुँदैन । संघ संस्थाको लक्ष्य भनेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । कसरी विकास गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । तर हाम्रा ‘लिडरसीप’मा भएका मानिसले आफु कसरी ‘लिडरसिप’मा रहने भन्ने मात्र सोच्नाले विकास हुन नसकेको हो ।
यसमा राजनीति छिरेको छ भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
साथीको प्रगति देखेर ईष्या गर्ने बानीले समस्या आएको हो । कुनै विद्यार्थीलाई समस्या आएको भए कुन कम्पनीबाट गएको हो त्यसमा आफ्नो समस्या राखेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । संस्थाहरुको खेदो खन्न कसैले पनि संसदमा गएर कुरा राख्नु भनेको नेपालबाटै यो संस्था हटोस् भन्ने सोचले राखिएको हो । यस किसिमका समस्याहरुले धेरैलाई असर पर्छ ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी अलपत्रको परेको विषयमा अल्फाबिटाको नाम फोकस गरेर लिईयो । यसमा पनि षड्यन्त्र लुकेको छ ?
जहाँसम्म एआइबिटीको त्यो केश छ । यो कुनै नराम्रो संस्था होइन । त्यसमा नर्सिंङको मात्र एउटा समस्या हो । नर्सिङमा पनि ४ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु नेपाल लगायतका देशहरुका छन् । विद्यार्थीहले पनि एग्रीमेण्ट गरेरै गएका हुन् । हामीले उनीहरुलाई कुनै किसिमको गलत कुरा भनेका छैनौ ।
एउटा आइडिपी आउने कुरामा बिभिन्न संघ संस्थादेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठी र संसदमा समेत कुरा उठ्यो । कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो भन्दा अगाडिका मन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा सचिव कुनै न कुनै हिसावले ‘बाहेस’ भएको स्थिति छ । उहाँहरुले भएको कानुलाई पनि अलग तरिकाले अर्थ लगाउने गर्नाले पनि यस्तो समस्या आएको हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले धेरै मेहेनत गर्नुभएको छ । २ वटा कम्पनी आउँदा बन्द गर्नुपर्ने कारण छैन ।
धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थींहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदानका लागि बाहिर पठाउनु झनै राम्रो हुन्छ । एकछिनको लागि बिजनेश तलमाथि भएपनि देशलाई चाहिएको ‘बेस्ट कम्पनी’ स्थापना हुनुपर्छ । सरकारले ‘बेस्ट’ कुरा बुझेर काम अगाडि बढायो भने उन्नति प्रगति अवस्य हुन्छ । यो बिजनेश भोलि मेरा छोराछोरीले गरे पनि र नगरे पनि म आफु अल्फाबिटामा रहुञ्जेल बिशुद्ध र सही परामर्श दिने काम गर्नेछु ।
आइडिपी कम्पनी तपाईले नै ल्याएको भनिन्छ नि, साँच्चै हो ?
हो, धेरैले भन्छन् तर म यसमा सहभागि मात्रै छु । नेपालमा मैले धेरै गाह्रो र परिश्रमपूर्वक ‘IELTS’ लिएर आएको हुँ । यही रिस र ईष्याले उनीहरुले यसो भन्ने गरेका हुन् । ईष्यालाई छोडेर काम गरियो भने नेपालीहरुले जहाँ पनि राम्रो गर्न सक्छ ।
Alfabita group, IDP education consultancy
Prevअनमोल र सुहाना रोमान्टिक मुडमा
न्युजिल्याण्ड मस्जिद आक्रमण: मृतकको संख्या ४९ पुग्यो, बीस घाइतेNext
आइडीपी विगेस्ट अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर हुने
र्‍यापर पोप स्मोकको हत्या
सेनाद्वारा बम डिस्पोजल